musha nyika dzakabatana Akasanganiswa Maartist Jorge Masvidal Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yeMusanganiswa Artist ane zita rezita “Mutambo".
Yedu Jorge Masvidal Childhood Nyaya, kusanganisira yake Untold Biography Chokwadi, inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva pamazuva ake ehujaya, kusvika paakava nemukurumbira.
Hongu, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevarwi veUFC vakaoma uye vanozivikanwa zvikuru. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezvaJorge Masvidal's biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Jorge Masvidal Mwana WeChinyorwa:
Jorge Masvidal akazvarwa musi wegumi nemaviri waNovember 12 paMiami muFlorida. Ndiye ega mwana akaberekwa mumubatanidzwa pakati paamai vake vadiki vanozivikanwa vePeru uye baba vake veCuba, Jorge Masvidal Sr.
Pazasi pane mufananidzo wemumwe wevabereki vaJorge Masvidal (baba vake vepamusoro).
Baba vaJorge Masvidal - Jorge Masvidal Sr.
Nyika yeAmerica yedzinza rakasanganiswa neCuba nePeruvia kwakatangira mhuri yakakurira munzvimbo yakaipa kumadokero kweMiami kwaakakurira mumhuri yepasi-yemhuri mamiriro ekumashure.
Vabereki vaJorge Masvidal vaive vakaita sevanhu vazhinji vaishanda asi vasina dzidzo yepamusoro yezvemari uye kazhinji nguva vaitambura nemari kuti mhuri yavo ienderere mberi.
Kukura muMiami, mudiki Masvidal aive nesimba rakawanda uye hushingi zvekuti akatanga kurwa achipinda mudambudziko paakangova nemakore 3-4 chete.
"Masvidal akarwa kwete chete pane chero mukana wakapihwa asi akazvigadzirira iye mikana chero kupi kwaaiona kwakakodzera kusanganisira pre-chikoro".
Akarangarira Jorge Masvidal Sr wehutsinye hwemwanakomana wake. Kusiyana neavhareji vana muUS, vabereki vaJorge Masvidal havana kumbopa mwanakomana wavo tsika dzakawanda nekuda kwemamiriro ezvinhu akange ari pamusoro pavo.
Jorge Masvidal Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
SeMasvidal mudiki paakakura musimba uye nekukwirira saizvozvowo kugona kwake kwekuwana muviri pakudenhwa kudiki.
Akatodanana nebhokisi uye aine ngano dzetsiva saRoberto Duran naJulio Cesar Chavez sezvidhori zvake zvehudiki.
Panguva iyo Masvidal paakatanga chikoro chesekondari kuSt Brendan high school, akatanga kufarira mutsimba asi akarambidzwa kukwikwidza mumutambo uyu nekuda kwemamaki ake akashata ezvidzidzo.
Saka, mudiki panguva iyoyo akasiiwa asina sarudzo yekupa hukasha hwake nzira ine pundutso kunze kwekujoinha kirabhu yekurwira iri pachivanze chechikoro.
Yakanga iri pakirabhu iyo mudiki Masvidal yakava nzira yekurwa mumigwagwa sezvo mavhidhiyo ake airwa mumigwagwa akatanga kuoneka online.
Masvidal akazopedzisira adzingwa kubva kusekondari mushure mekuedza kwese kuitisa kudzikisira kwehasha dzake kwakaratidza kubvisa nhumbu.
Kubva ipapo, Masvidal akakanganwa nezvechikoro uye akatanga kufunga nezvekuita basa kunze kwekurwa.
Mifananidzo inoratidza Jorge Masvidal achienda kumba mushure mekurwa kwemugwagwa.
Jorge Masvidal Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Kupesana nezvitendero zvakapararira, Masvidal haana kutanga kushandura tsandanyama mumutambo wetsiva achangodzingwa kuchikoro. Pane kudaro, akabatana neMMA muna 2003 uye akashandura unyanzvi mugore rimwe chete.
Yakanga isati yasvika gore ra2005 apo Masvidal akazova mutambi wetsiva uye akaita rake rekutanga kurwisa Joseph Benjamin gore iro. Kubva panguva iyoyo, Masvidal haasati ambobatanidzwa mune chero nyanzvi yekurwa tsiva.
Kunyangwe Masvidal zvakare aine imwe yakanyorwa yehunyanzvi kickboxing bout, zvishoma zvinozivikanwa nezvekuti ndiani waakatarisana naye mumutambo uye kwazvakaitika.
Isu taigona kungochera kuti MMA ndipo paive neshuwiro yake uye zvakaratidza muhunhu hwekuhwina kwake sezvo iye akatonga asiri pasi pemasangano gumi nematanhatu eMMA anosanganisira Shark Fights, World Victory Road, Bellator neStrikeforce.
Jorge Masvidal akarwa mumasangano mazhinji eMMA anosanganisira Strikeforce.
Jorge Masvidal Biography - Rwendo rweMukurumbira:
2013 yaive shanduko muhupenyu nekusimuka kwaJorge Masvidal nekuti raive gore iro Strikeforce kukwidziridzwa kwakawanikwa neUltimate Fighting Championship (UFC), budiriro yakaona Masvidal akawana zvakare.
Ndichiri kuUFC, Masvidal akakwanisa kuchengeta musoro wake pamusoro pemvura nekuona kuti chiyero chake chewaini chakasimudza kurasikirwa kwake.
Muna 2014, Masvidal akanamira muUFC nekuti hapana munhu aida kumurwisa. Kunyangwe murwi aisimuka nekukurumidza anga asati awana mukurumbira waaishuvira zvikuru, aive nenjodzi yakawandisa uyezve asina kukura zvakakwana kuti ave zita remumba.
Kuti atore zvese izvi, Masvidal akarasikirwa nematanhatu emitambo yake mina pakati paApril 3 kusvika Chivabvu 4, budiriro yakaita kuti zvikwanise kuti murwi ave munzvimbo yekutaurirana chero chinhu neUFC.
Jorge Masvidal aishuvira kuita chinetso mu2014 asi hapana murwi aida kumurwisa.
Jorge Masvidal Bio - Simuka Mukurumbira Nhau:
Basa raMasvidal muUFC rakazomuka apo murwi wevarwi vehondo - Ross Pearson akabvuma kurwa nemurwi akapererwa.
Pasina mubvunzo kunyora zvakawanda, Masvidal akakunda Pearson nechisarudzo chakabvumirana pane zvekutanga zveUFC 201.
Masvidal ane hutsinye akaenderera mberi kuhwina kurwa kwake kunotevera muna Zvita 2016 & Ndira 2017 uyezve akatarisira kubudirira kwaakange asingazive kuti aingova makore maviri chete kubva kwaari.
Taura nezve budiriro, yakauya musi wa6 Chikunguru 2019 apo Masvidal akagogodza Ben Askren kuUFC 239 kuburikidza nemabvi anobhururuka mumasekondi mashanu chete muround rekutanga remutambo.
Mufaro wevose vemhuri yaJorge Masvidal vaisaziva miganhu panguva yaakawana yakadaro.
Jorge Masvidal akagogodza Ben Askren mumasekondi mashanu kuti vagadzire rekodhi nyowani yeUFC yekugogodza.
Iyo yekugogodza iyo yaimhanyisa kwazvo munhoroondo yeUFC haina kungowana chete Masvidal performance yeiyo Night Mubairo asi yakamusimbisa semumwe wevane utsinye uye vakakurumbira varwi veUFC.
Jorge Masvidal Hukama Hupenyu Hupenyu:
Kure kubva kuna Jorge Masvidal mweya wekutora mweya wekufema, anga ave neanopfuura makore gumi ehupenyu hunerudo hupenyu newaaimbova mudiwa naye - Iman Kawa.
Pamberi paIman, Jorge aisazivikanwa kuti aive nevasikana kana zvirinani, musikana weveruzhinji. Iye anongozivikanwa kuti ave nemakore gumi achidanana naIiman Kawa vasati vaenda vakasiyana nzira.
Muchokwadi, Iman haigone kutariswa saMasvidal aimbova mukadzi nekuti vaive vasina kumboroora.
Jorge Masvidal nemumwe wake waaimboshanda naye Iman Kawa.
Shiri dzerudo dzekare dzakambove vabereki. Kubatana kwavo kwakakomborerwa nevana vatatu vadiki vanoziva vana (mwanakomana, mwanasikana uye mumwe mwana).
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora iyi bio, Masvidal haana kuroora uye anoita kunge akaisa pfungwa pakununura mamwe ma knockout kutora MMA basa rake kuUFC kuenda kumatunhu akakwirira sezviri pachena mukukwira kwehondo yemurwi kubva pamakwikwi ake manomwe apfuura.
Jorge Masvidal Hupenyu Hwemhuri:
Chero nguva iyo mhuri yaJorge Masvidal paanoverenga maropafadzo ake, vanonyatsoverenga Jorge kaviri uye havafi vakafungidzira kuva noupenyu hwemhuri huri nani pasina iye.
Muchikamu chino, tinokuunzira chokwadi nezve nhengo dzemhuri yaJorge Masvidal kutanga nevabereki vake.
About Jorge Masvidal baba:
Jorge Masvidal Sr ndiye baba veanobudirira mutambi wetsiva. Iye wedzinza remhuri yeCuba uye akatamira kuUnited States pazera diki kwazvo.
Ivo baba vanotsigira vaimbove naMasvidal kwemakore mana ekutanga ehupenyu hwake hwepakutanga asati atongerwa makore gumi nemasere nguva yejeri yekutengesa zvinodhaka.
Kunyangwe mutirongo, Masvidal Sr aive nesimba rakanaka pamwanakomana wake uyo waaigara achiraira kuti ave mugari anoteerera mutemo. Ivo baba veumwe vakaburitswa uye vanonakidzwa nehukama hwepedyo nemwanakomana wavo.
Jorge nababa vake panguva yehurukuro.
About Jorge Masvidal Amai:
Kunyangwe zvisiri zvakawanda zvinozivikanwa nezvaJorge Masvidal amai, murwi akamboratidza kuti akashanda mabasa akawanda kubatsira kumurera mushure mekunge baba vake vasungwa.
Akange asiri amai vane rudo chete asi mudzimai akanaka kumurume wake sezvinoonekwa munzira yaakavanza chokwadi chekuti Masvidal Sr akaiswa mutirongo kubva kumwanakomana wake kuchengetedza chimiro chemhuri.
Yaive apo Masvidal paakasvika zera iro amai vake vakatsanangura chakavanzika chekusavapo kwemusoro wemhuri.
About Jorge Masvidal mukoma uye hanzvadzi:
Zvinoita sekunge vabereki vaJorge Masvidal vakamuita semwana wega.
Kutaura kwedu kwakanyanya kunotsigirwa nenyaya yekuti murwi anongotaura nezvaamai nababa vake panguva yekubvunzurudzwa apo pasina marekodhi aripo ehama nehanzvadzi dzake.
Saizvozvowo, hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezvemadzitateguru aMasvidal kunyanya vanasekuru navanamai vake nasekuru nasekuru nasekuru ivo babamunini, babamunini, babamunini, babamunini, nababamunini vasikana vasingazivikanwe panguva yekunyora.
Jorge Masvidal Hupenyu hweMunhu:
Wati wakambozvibvunza here nezve chii chinoita Jorge Masvidal chishambwe? Wakamboedza here nesimba kuti utarise hunhu hwehunhu hwake hwemhete?
Wobva waramba uchiverenga apo isu tichizarura chokwadi nezve iye murwi's Persona kuitira kuti akubatsire iwe kuwana izere mufananidzo wake.
Kutanga, Masvidal's Persona inoratidza hunhu hunoratidzwa nevanhu vanotungamirirwa neScorpio Zodiac chiratidzo.
Jorge Masvidal anoda kushambira sechiitiko chemutambo.
Iye ane nzwisisika, akasarudzika, ane shungu, anoita zvekare. ane yakasarudzika pfungwa yekusetsa uye kashoma kuburitsa chokwadi nezve ake ega uye ehupenyu hupenyu.
Zvinodiwa nemurwi uye zvekuvaraidza zvinosanganisira kuchovha bhasikoro, kukwira makomo, kutsika muchikepe, kushambira, kuona mafirimu pamwe nekushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Jorge Masvidal Mararamiro:
Unoziva here kuti Jorge Masvidal ane huwandu hunofungidzirwa hwemadhora miriyoni imwe panguva yekunyora iyi biography?
Matunhu ekukwira kwese kwaMasvidal akakosha anotora fomu muhombe muhoro iyo yaanogamuchira yekurwira uku kuongororwa kwehupenyu hwake kunoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Ehe, murwi haana kukura pakuratidza mota dzake uye nhumbi, zvisinei, hapana kuramba kwekuti anogara mune imba inokodzera maMMA shasha paanoshandisa mari yakawanda kuzorora kunzvimbo dzinodhura dzekuzorora panguva yekuzorora uye zororo.
Jorge Masvidal anogona kupupurira chokwadi chekuti mari inounza kuvimba uye hupenyu hwoumbozha.
Jorge Masvidal Chokwadi:
Yedu Jorge Masvidal nyaya yehudiki uye biography yakanakisa inoputira nekutevera zvishoma kuzivikanwa kana kusingazivikanwe chokwadi nezvemurwi.
Kusvuta uye kunwa: Iye murwi akakura pakuputa nekunwa, hunhu hwaangangodaro akagara nhaka kubva kune mumwe wevabereki vake- baba vake. Nekudaro, iye haana hanya nekusimudzira iyo tsika kuburikidza neyemagariro midhiya anobata.
Zvakangodaro, anozvibata maitiro ese ari pakati nepakati uye anorega kuita chero chinhu chinokwanisa kukanganisa hutano hwake.
Tattoo: Kusiyana nevazhinji varwi veMMA, JorgeMasvidal - ane hurefu hwamamita mashanu masendimita gumi nemasere haana matattoo, kana vateveri havana matatto ake panguva yekunyora. Ari pane rugare nechitarisiko chake uye haatarise hunyanzvi hwemuviri seyekuwedzera kuri madikanwa.
Mufananidzo unoratidza kuti Jorge Masvidal haana ma tattoo panguva yekunyora.
Jorge Masvidal Chitendero:
Vabereki vaJorge Masvidal vairatidza kunge vasina kudzidzisa Jorge kuti ave nechitendero. Masvidal haanamate uye achiri kupa humbowo nezvezvaaitenda pakunyora.
Pamusoro pezvo, haana kutaura kana kufamba zvinomupa semunhu asingatendi. Saka nekudaro, chinzvimbo chake maererano nenyaya dzekutenda chiri pakati pekuvanzika uye chinotarisa paMixed Martial Arts.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Jorge Masvidal Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!